साम्राज्ञी र आकाश ‘तिमी सँग’ सुटमा बेहोस ! « Ramailo छ
साम्राज्ञी र आकाश ‘तिमी सँग’ सुटमा बेहोस !
प्रकाशित मिति : Mar 28, 2018
समय : 1:38 pm
चैत २३ गते प्रदर्शनमा आउँने फिल्म ‘तिमी सँग’ यतिबेला टिम फिल्म प्रचार प्रसारको व्यस्त छ । फिल्ममा नायिका साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह र नायक आकाश श्रेष्ठ लिड रोलमा छन् । ‘तिमी सँग’ प्रचारको क्रममा साम्राज्ञी र आकाशले एउटा नरमाईलो घटना सेयर गरेका छन् । भिडियो हेर्नुस् :
आकाश र साम्राज्ञीका अनुसार गीत खिच्न उनीहरु अन्नपूर्ण वेस क्याम्प गएका थिए । सो समयमा उनीहरु चिसोले बेहोस भए । ‘निकै दुःख गरेका छौं, फिल्म राम्रो बनेको छ । दर्शकले साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ’, दुवै भन्छन् ।
उसो त लगालग दुई हिट फिल्म दिएकी साम्राज्ञीले तिमीसँग बाट सफलतामा ह्याट्रिक हान्ने दौडमा छिन् भने आकाशका लागि यो फिल्म हिट हुन जरुरी छ । उनको डेव्यु फिल्म म त तिम्रै हुँ असफल भएको थियो ।
यात्राको क्रममा बस्ने माया प्रेम र विछोडको विषयमा बनेको फिल्म तिमी सँग मा साम्राज्ञी, आकाशसँगै नाजिर हुसेन, लेखक, निर्माता तथा निर्देशक शिशिर भण्डडारी र अनुपम श्रेष्ठको अभिनय रहेको छ । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर सहित अन्य सेलिव्रेटी पनि अतिथि भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् ।